Averina indray, ny 21 Jona dia Andro Iraisam-pirenena Yoga ary afaka mahazo ny medaly Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Herintaona indray dia tonga amin'ny andro iraisam-pirenena an'ny Yoga isika ary ho an'ity Apple ity dia te hankalaza azy araka ny sahaza azy. Tamin'ny taon-dasa dia afaka nahazo marika na medaly tamin'ny Apple Watch ianao raha nahavita fanazaran-tena Yoga tamin'ny andro fankalazana. Apple dia tsy nanasarotra ny lohany loatra ary nanapa-kevitra fa amin'ity taona 2021 ity dia ho toy izany koa. Araho hatrany izany andro izany 21 (indray) hamita ny fiofanana Yoga haka medaly. Iray indray.
Ny Apple Watch dia fitaovana ara-pahasalamana miaraka amin'ny asan'ny fiambenana. Sa tamin'ny fomba hafa? Ny zava-misy dia ny iray amin'ireo fiasa ara-pahasalamana ireo dia ny hitazomana hatrany ny mpampiasa azy amin'ny fanatanjahan-tena. Izy io dia manao izany amin'ny alàlan'ny famitana peratra sy fandraisana medaly isaky ny hetsika vita. Tamin'ity taona ity, mbola ao an-tsaintsika sy ao amin'ny vatantsika indray ny andron'ny Yoga, izay ananantsika pMandresy amin'ny medaly sy medaly isika ho fanomezam-boninahitra indray ny andro iraisam-pirenena ankalazaina amin'ny 21st.
Ho afaka hahazo izany, ny sisa ataontsika dia:
Sokafy ny App fampiharana ao amin'ny anao Apple Watch ary misafidy yoga amin'ny lisitry ny karazana fiofanana
Aorian'ny fisafidianana yoga, ny Apple Watch dia hanao a Countdown 3 segondra ary hanomboka handraikitra ny fampiofanana anao izany
Ho hitanao fa ny App fampiharana Mampiseho ny fandrosoanao amin'ny fampiofanana, ao anatin'izany ny refy toy ny isan'ny kaloria may, ny fitepon'ny fony, ary ny fotoana nahavitrika anao.
Rehefa vita ianao ny fampiharana 15 minitra anao, vitao ny fampiofanana anao ary miandry ny lokanao. Matetika dia eo no eo izy io, nefa indraindray dia somary nahemotra kely. Raha mitranga aminao izany, ny azonao atao dia avereno indray ny Apple Watch dia ho hitanao ny fisehoan'ny medaly. Ho mazoto kokoa ianao ary hisaotra anao ny fahasalamanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Averina indray, ny 21 Jona dia Andro Iraisam-pirenena Yoga ary afaka mahazo ny medaly Apple Watch ianao
Fafao ny Mac manontolo dia mora kokoa sy haingana kokoa amin'ny macOS Monterey